I-Tyrese Gibson Biography - Ngomculi / UConctor / Model Tyrese Gibson
ITyrese Gibson Biography
by UMark Edward Nero
I-biography yomculi ophumelelayo kunye nomdlali
UTransse uDarnell Gibson, owaziwa ngokungaziwa ngokuthi iTirese, wazalwa ngoDisemba 30, 1978 eLos Angeles. Wakhula eWatts, ummandla waseMzantsi Los Angeles, ngaphambili (kwaye ngokubanzi) owaziwa ngokuba yi-South Central, ummandla ongaphakathi-dolophu owaziwayo ngobugebengu, ukuhweba kweziyobisi kunye neengcambu.
Uyise wakhe washiya ngo-1983 kunye nonina, uPrisila Murray Gibson (née Durham), wakhulisa uTirese kunye nabantwana bakhe abathathu abadala njengomzali omnye.
I-Tyrese yayinomntwana onetalente. Wayekuthanda ukucula nokuphinda . Wayeyilungu leqela le-Rap elibizwa ngokuba yi-Triple Impact kwaye lahamba ngegama eli-Black-Ty, kwaye wenza ngeempawu zetalente zendawo.
Ngowe-1994, xa wayeneminyaka eyi-16, iTransse yathengisa i- Coca-Cola yorhwebo kwisiphakamiso somfundisi wakhe womculo wesikolo esiphakeme. Wafumana umsebenzi kwaye wayenenkwenkwezi yokubethelela inqaku elithi "Njalo iKoca-cola," eyakhawuleza yaholela emsebenzini omningi.
Ngonyaka kamva waba ngumzekelo ophumelelayo, ebonakala kwiintengiso zeGuess noTommy Hilfiger. Sekunjalo, iTransse yafa-isetyenziswe kwimisebenzi yomculo.
Ngo-1998 wasayinwa kwiRekodi zeRCA kwaye emva koko wakhupha i-start-title yakhe yokuqala. Ngaloo nyaka unyaka we-MTV VJ kwaye wabamba umboniso wevidiyo yomculo weveki "MTV Jams." I-Thirre single single, "Sweet Lady," yaba yiyona nto iqhutywe yi-albhamu, ehamba phambili kwiNombolo 9 kwiShadi leBhanti ye-Billboard R & B / Hip-Hop. Ingoma nayo yamfumana iGrogam yokutyunjwa kweNgcaciso ye-R & B eSebenzi yamaVocal kwaye i-albhamu kamva yaba yi-platinum eqinisekisiweyo.
Ngomnyaka we-2001 wakhulula umgudu wakhe wokunyamekela u- 2000 Watts , owahamba ngegolide. I-albhamu yomntu wesithathu engatshatanga, "Njengomntwana osemncinci," ephethe uSnoop Dogg noMnu Tan, babonakala kwi-soundtrack yefilimu ethi "Baby Boy," eyabonakalisa indima ebalulekileyo yokubamba iqhaza likaTirese.
I-RCA yachithwa kwaye iTransse idluliselwe kwi-J Records, ikhupha i- Wanna Go Ku- 2002.
Yayikhiqiza yakhe iqabane elithandwayo kunomhla "Indlela Oya kuyenza Ngayo," eyaqala ngo-Nombolo 7 kwichati zeengoma ze-R & B / Hip-Hop.
Wakhupha i-albhamu ye-disc, i- Alter Ego, ngo-2006. Nangona i-albhamu yayenzelwe ukubuyela kwiingcambu zakhe ze-rap kunye ne-hip-hop (yaphawula ukuqaliswa kwayo kwe-rap alter ego Black-Ty); ukudideka okukhulu kwaye yaba yi-albhamu esithengisa kakhulu kunomsebenzi wakhe.
Ngomnyaka olandelayo wabambisana noGinuwine neTank ukuba benze i-R & B supergroup TGT, isichazi magama abo. Baceba ukurekhoda i-albhamu, kodwa iishedyuli ezixakekile zifike endleleni kwaye iprojekthi yayibhalwe ngokungapheliyo.
Emva kokuchitha iminyaka emininzi ukusuka kumculo ukugxila kwintsapho yakhe kunye nokwenza umsebenzi, iTransse yabuyela kumculo ngo-2011 nge- Invitation Invite . Iqala ngo-Nombolo 9 kwiBillboard 200 kwaye yamfumana enye igama iGrmmy ye-Best R & B Album.
Ngo-2013 i-TGT yamemezela ukuba ibuye iphinde ikhuphe iiKumkani ezintathu kwiAtlantic Records ngaloo nyaka. Ngaloo nyaka uTirese wachaza ukuba uqale ukuvelisa i-albhamu yakhe yokugqibela yaseBlack Rose .
I-albhamu ye-disc ezimbini yakhululwa ngo-2014 kwaye yaqala kwiNombolo 1 kwiBhodi yeBillboard 200, eyenza ibe yi-albhamu yokuqala ye-Nombolo 1 yomsebenzi wayo.
Ukulandela ukukhululwa kwe- Alter Ego ngo-2006 iTransse yatshintsha umsebenzi wakhe womculo kwiminyaka esixhenxe ezayo ukuba igxile ekusebenzeni.
Ikhefu lakhe lokuqala laliqhambuka njenge-Pearce yaseRoma kwi-"2 Fast 2 Furious" (2003), isitifiketi sesibini se-"Fast and Furious" franchise.
Ezinye iikhredithi zokuqala ziquka "Abazalwana abane" (2005), "Uzinzulu oMkhulu" (2007) kunye ne "Death Race" (2008).
Wabeka inxaxheba yakhe enkulu ngelixa wayenenkwenkwezi kwifilimu yokuqala ye-"Transformers" ngo-2007. I-Tyrese yaqhubeka yenkwenkwezi kwinqaku elandelayo 'izitolimni ezimbini ezilandelayo: "Abaguquleli: Ukuziphindezela kwe-Fallen" (2009) kunye ne "Transformers: Ubumnyama Inyanga "(2011).
Ekugqibeleni waphindela kwi-"Fast Fast and Furious" franchise, eneenkwenkwezi kwi "Fast Five" (2001), "Fast & Furious 6" (2013) kunye ne "Furious 7" (2015).
I-Tyrese nayo yombhali oshicilelweyo. Ngo-2012 wakhupha i-New York Times eyithengisa kakhulu "Indlela yokuphuma kwindlela yakho." Wavumelanisa incwadi yakhe yesibini kunye nomhlobo osondeleyo woBuvukeli, obizwa ngokuba ngu "Manology: Iimfihlelo Zengqondo Yakho Yembonakaliso," eyaba yinto ehamba phambili eNew York Times.
"Indlela Oyazenza Ngayo Njengaye"
"Izimpawu Zothando U-Makin" "
Ndifuna Ukuya (2002)
Vumela ukuVunywa (2011)
AmaKumkani amathathu (kunye neTGT) (2013)
Izitayela zeBlues: i-Mississippi Delta Blues
Iimvumi zoMculo zezingane
Iingcebiso zokuthatha abantwana kwimikhosi yoMculo
Imbali yoMculo Wezwe
Erik Satie 6 Gnossiennes
Iipolisi eziphezulu ezi-10 eziphezulu ze-40 kunye ne-Pop
Isikhokelo soTshintsho olupheleleyo lwesiNgesi lwe "Gloria"
Imiqondiso Yisikhathi sokutshintsha iBrashi
Ithini, Kutheni, Nendlela Yokulinganisela Ngamavili
Ukwahlukana Phakathi kweMichanical kunye ne-Electropneumatic Paintball Gun
Yintoni iFade (okanye 'Fade Shot') eGoli?
Yintoni "i-Dawn Patrol"
"Ixhoba Lombane" libhekiselele kwiGreek Mythology
Abadlali abaphezulu: iiMeteorologists zeMashishini ezenza uncedo lwenu
Imfazwe Yomthonyama yaseMerika: iMfazwe yaseWilson's Creek
KwiNgxabano engavumelekanga, Sebenzisa iSicwangciso seMacandelo amane
Intlekele yeSuez - Isiganeko esibalulekileyo kwi-Decolonization ye-Afrika
I-Primal Wear Jerseys I-Rock - Hlaziya
Ngubani owayenguDoreen Valiente?
Isicatshulwa seMacroquial Prose Style sikaMark Twain
Ziziphi iindidi ezahlukeneyo zeChina Character 日 (rì)
I-Opium Poppy - Imbali Yomzi
Indlela yokudala ifayile yeGEDCOM kwi-Genealogy Software okanye kwi-Online Tree
Ngubani owasungula iKinetoscope?
Yintoni Ebonakalisa Injongo?
Iingcebiso ezi-6 zokuBhala ngeZenzo eziPhila